रोकियो ब्राजिलको चुरीफुरी, बेल्जियमको कडा डीफेन्स ब्राजिललाई पर्यो भारी !! बेल्जियम सेमी फाइनलमा !! हेर्नुहोस फोटो फिचरहरु - Experience Best News from Nepal
रोकियो ब्राजिलको चुरीफुरी, बेल्जियमको कडा डीफेन्स ब्राजिललाई पर्यो भारी !! बेल्जियम सेमी फाइनलमा !! हेर्नुहोस फोटो फिचरहरु
प्रकाशित मिति : शनिबार, असार २३, २०७५
रसिया , जारी बिश्वकप २०१८ को क्वाटरफाइनल अन्तर्गत दोस्रो खेल ब्राजिल बिरुद्ध बेल्जियममा सुनौलो २-१ गोलले सानदार जित बेल्जियमले हात पारेको छ । मार्सेलो फीट हुनुको साथ नेपाली समय ११;४५मा सुरु भएको खेलमा आत्मघाती गोलसंगै ब्राजिलले बेल्जियमका निम्ति खाता खोल्यो । बेल्जियमका डीफेंदर कम्पनीले गरेको ट्याक्टिसले पहिलो गोल सफल हुन पुग्यो भने दोस्रो गोल सफाईको साथ ब्रुयनेले लिएका थिए ।
खेलमा निकै फर्किन कोसिस गरिरहेको ब्राजिलले पहिलो हाफमा कुनै गोल गर्न सकेन भने दोस्रो हाफमा अगुस्टोद्वारा ७६ औ मिनेटमा गरेको हेडले जाली चुम्यो र खेल बिना पेनाल्टीको २-१ ले समापन भयो ।
खेलमा दुई सफा पेनाल्टी लाएक फौललाई VAR ले सफाई मंदियो जसले बेल्जियमलाइ निकै फाइदा पुग्यो । फिफा बरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिल फिफा बरियता तिनमा रहेको बेल्जियमसंग २-१ले हार्न पुग्यो ।
५ पटक बिश्वकप बिजेताबनेको ब्राजिलको यो हार निकै लाजमर्दो मान्न सकिन्छ किनकि २०१४ बिजेता जर्मनी ग्रुपबाटै बाहिरियो जसको बिश्वकप जित्ने सम्भाना ८ प्रतिसत थियो भने उपविजेता अर्जेन्टिनाको पनि ८ प्रतिसत नै थियो तर ब्राजिलको बिश्वकप जित्ने सम्भावना भने २८ प्रतिसत रहेको थियो तर २८% सम्भावना बोकेको ब्राजिल बेल्जियमसंग चुक्न पुग्यो ।
हारसंगै आजको दुवै खेलमा दक्षिण अमेरिकाका दुवै टोली उरुगे र ब्राजिल बाहिरिएका छन् भने यूरोपेली टिम बेल्जियम र फ्रान्स भने आर्को राउण्डका निम्ति प्रतिस्पर्धामा जाने छन् यानी सेमी- फाइनल । अबको अर्को खेल यी दुई टिम बीच हुनेछन्, खेल सेन्ट पिटरबर्गमा मंगलबार हुदै छ ।
खेलमा के भयो :
-खेलमा ३ गोल भएका थिए २ गोल बेल्जियम र १ गोल ब्राजिल, गोल समय – १३ मिनेट ३१ र ७६ मिनेट
-गोल अट्याक २७ ब्राजिल , बेल्जियम ८ मात्रै रहेको थियो -गोलमा अट्याक ९ ब्राजिल ३ बेल्जियम -८ कर्नर ब्राजिल ४ बेल्जियम
-बल पोसेसन ५७% ब्राजिल र ४३% बेल्जियम -पास ब्राजिल ५५७ र बेल्जियम ३६९
खेल पूर्ण रुपमा ब्राजिलको हात भइरहदा पनि खेलमा गोल लाइन भने बदल्न सकेनन्, पहिलो हाफको सुरुवातीमा दुवै टिमको खेल सामान्य थियो तर पहिलो गोल आफ्नै टिमले हान्दिदा टोलि थोरै स्तब्द बन्यो साथै दोस्रो गोल ३१ मिनेटमा भैदिदा टिमलाइ निकै गारो बन्यो तर खेलमा फर्किन खोजिरहेको ब्राजिललाई बेल्जियमले निकै पोसेसन दियो तर डीफेन्स लाईन भने निकै बियो राख्यो जसलाई तोड्न निकै कठिन बन्यो ब्राजिल।
खेलमा निकै फौल देखिएको थियो ब्राजिल २ पहेलो कार्ड र बेल्जियम २ पहलो कार्डको बुक भएको थियो ।
ब्राजिलले सामाजिक संजालमा निकै आलोचना झेल्दै आईरहदा ब्राजिललाइ बेल्जियमले पहिलो पटक हराई छाड्यो । खेल निकै रोमान्चक बन्नुको साथै निकै कडा प्रतिस्पर्धा पनि देखियो । होडबाजी आर्को राउण्डको थियो ।
खेलमा म्यान अफ द म्याच भने केविन डे ब्रुयने घोसित भय ।
फ्रान्स बिरुद्ध उरुगे क भयो ?
अप्रत्यासित खेल देखि रहेको बिश्वकप २०१८ को क्वाटरफाइनलको पहिलो खेल आज उरुगे बिरुद्ध फ्रान्स सम्पन्न भयो खेल २-० मा समाप्त भएको छ । खेलमा पहिलो हाफ १ र दोस्रो हाफ १ गरि २ गोलको लिडसंगै क्वाटरफाइनलको पहिलो खेलमा फ्रान्स विजय भएको छ ।
काभानी बिना मैदानमा उत्रेको उरुगेलाई पहिलो गोल भारानेले ४० औ मिनेटमा हेडर मार्फत गरेका थिए भने दोस्रो हाफमा फ्रान्सका फ्रिजमनले हानेको लामो प्रहार उरुगेको किपरले रोक्न नसकी गोलमा परिणत भयो । खेलमा किपरको गल्तिले उरुगेलाइ निकै स्तब्द परेको छ । दुइ गोलको लिड रहदा पनि उरुगेलाइ निकै असहज र खेलमा फर्किन न सक्ने कारण हुन सक्छ ।
केस्रा छुटिका सरिरको बनावोट बोकेको उरुगे, पहिलो हाफमा निकै हाबी बनि रहेको थियो तर खेलमा कुनैपनि गोल भने गर्न सकेन र सम्भावना पनि निकै कम सिर्जना गर्यो । एम्बप्पे फ्रान्सका एक स्टार बन्दै गरेका खेलाडी माथि निकै उरुगे हाबी बनेको देखिएको थियो । सार्थक खेल र निकै परिश्रम गरेको फ्रान्स आखिरकार उरुगे माथि हाबी बनेर बस्यो ।
खेलमा ७१ औ मिनेटमा गोल गर्ने ग्रीजम्यान खेलको म्यान अफ द म्याच बने । खेलमा आज फ्रान्सका अबल मानिने खेलाडी मातुदी २ पहेलो कार्डले गर्दा मैदानमा देखिन पाएनन् भने एडिंन्सन काभानी उरुगेका मुख्य ११ का खेलाडी बेन्चमै सिमित हुन् पुगे ।
आजको हारमा उरुगेका लागि काभानी न हुनु अभिसाब बन्यो साथै बिश्वक़पमा फ्रान्सले दोस्रो उरुगेमाथि को विजय हात पार्यो । यस खेलसंगै फ्रान्सले सेमी-फाइनलको यात्रा तय गरेको छ ।